Etu ị ga - esi họrọ nyocha nyocha ụlọ nyocha-News-VSmile Co., ltd
Etu ịhọrọ igwe nyocha ụlọ nyocha
Oge: 2021-01-19 ikwu:68
Ọ dị mkpa ịghọta nke mbụ na ụfọdụ nyocha batara na ngwanrọ CAD yana ụfọdụ anaghị eme ya. Ohaneze ị nwere nhọrọ nke usoro ezé CAD anọ zuru ezu: Dental Wings, 3Shape, inLab and Exocad.
Exocad dịkwa dị ka ụdị aha njirimara maka usoro dịka Zirkon Zahn, Amann Girrbach na Nobel Biocare. Naanị sọftụwia CAD a na - erekarị iche na nyocha ụlọ nyocha bụ Exocad na ụdị akara ya. Maka ihe ngwọta CAD ndị ọzọ niile CAD jikọtara ya na ngwa ngwaike nyocha.
ND SC AKWABKWỌ AKWABKWỌ NA-AH D D AL N'ALLỌ NCHE A:
Isi mmalite ọkụ, Ezigbo, Ọsọ, Ike, Nwee ogo, filedị faịlụ nyocha, arụmọrụ sọftụwia, ụgwọ ikike kwa afọ, ọnụ ahịa niile.
AH SOTA Isi: Imirikiti ihe nyocha ọhụụ dị ugbu a n'ahịa na-eji ihe a na-akpọ "ọkụ ahaziri ahazi" - ọkụ enwetara na ihe nyocha ma weghachite ya na igwefoto on-board. Ole na ole na ole ka na-eji ọkụ laser. Ọ bụ ezie na enweela ụfọdụ arụmụka kemgbe afọ ole na ole teknụzụ dị “mma” ahịa kwagara na sistemụ ọkụ ahaziri ahazi n'ihi na ọ na-enye ohere nyocha ahụ ka ịmee na oghere oghere na-emegide nke mechiri emechi, na-eme ka ojiji dịkwuo irè - niile na-enweghị imebi iwu i scanomi àgwà. Usoro ihe edoziri ahazi na-acha ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha ọcha.
EZIOKWU: Igwe nyocha nke ugbu a ga - enyocha ogo ziri ezi n'etiti 4 na 15 microns. Ohaneze ka nyocha ọfụma zuru oke, ọ dị oke ọnụ karịa ka ihe mejupụtara iji nweta oke ziri ezi dị oke ọnụ. Kwa ụbọchị, okpueze na ihe nrụpụta mmiri chọrọ ka a na-anabata ọkwa ziri ezi nke 10 microns. Oke nke ziri ezi bụ ihe na-achọsi ike mgbe ị na-enyocha ihe ịkụbanye ma ọ bụ na-eme njiko zuru ezu, njikọta njikọta. Manufacturersfọdụ ndị nrụpụta na-elekwasị anya na ọnụ ọgụgụ megapixels nke ese foto dị na nyocha ahụ dị ka isi iyi nke izi ezi, mana nke a bụ eziokwu karịa. More megapixels ga-eme ka enwetakwu data mana nke a nwere ike ọ gaghị eme ka ị nweta ozi bara uru, ọ ga-ebelata usoro nyocha ahụ mgbe niile. Igwe nyocha nwere ese foto na mpaghara 1.5 na 2.0 ga-emepụta nyocha ziri ezi nke ọma na ntanetị micron 4-5.
Ọsọ:Scanners niile dịtụ ọsịsọ ụbọchị ndị a. Dị ka n'ụgbọala, ka ị na-akwụkwu ụgwọ nyocha nyocha ọsịsọ. N'ikwu ya, ọdịiche dị ọsọ site na njedebe dị ala ruo na njedebe dị elu bụ nanị sekọnd ole na ole, na ọkwa ọsọ ọsọ n'ozuzu ha na-egosi n'ụzọ ezi uche na-adịghị na ya. Gịnị na-emekarị kwuru bụ ọsọ mgbe ịgụ isiokwu iji a "ìhè" ịgụ isiokwu atụmatụ nke site rougher i scanomi data. Eziokwu ga-anọgide na mgbe ị na-enyocha ihe zuru ezu na izi ezi usoro a na-ewe ogologo oge n'agbanyeghị ihe nyocha ị na-eji. Na njedebe nyocha nyocha bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji tụlee.
Ikike:Mepụta àgwà, akwụkwọ ikike na Nkwado:Usoro nyocha ga-adịgasị iche na ihe ha nwere ike nyocha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ naanị ụfọdụ nyocha nwere ike ihichapụ ihe nrụpụta ọkara nwere ike ịhazi. Naanị ụfọdụ ga-enyocha na agba. Naanị ụfọdụ nwere ike ịmatakwu echiche nke ọma. Naanị ụfọdụ nwere tinye-ons na ikike ị na-ebufe ntọala atumatu akọwapụtara n'ime sọftụwia CAD. Mgbe ị na-ahọ nyocha nyocha hụ na ị tụlechara ikike nke nyocha ahụ karịa usoro ọkọlọtọ.
Mepụta àgwà, akwụkwọ ikike na Nkwado:Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwongwo niile, ogo ụlọ nyocha nwere ike inwe mmetụta na 'ogologo ndụ na ogologo ndụ. Ejiri ihe ndị dị mma na-arụ ọrụ ka mma nke ga-eme ka arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya karịa oge. Akwụkwọ ikike dị iche iche maka nyocha a na-abụkarị otu afọ, mana afọ abụọ na ndị ọzọ bụkwa ihe a na-ahụkarị. N'ikpeazụ, nkwado dị mkpa maka nyocha dịka ihe ọ bụla ọzọ nke teknụzụ teknụzụ dijitalụ, yabụ hụ na onye nyocha gị nwere ahụmịhe yana akụrụngwa iji dozie nsogbu ọ bụla ị chere.
Ydị ntinye na CAD:Na isi nyocha / igwe nyocha na CAD bụ ihe abụọ dị iche, mana ọtụtụ ndị nrụpụta anaghị emeso ha otu ahụ. Ndị nyocha niile na-abịa na sọftụwia nwere ikike ịmepụta ọrụ, jikwaa usoro nyocha na ijikwa arụmọrụ nke nyocha ahụ. N'otu oge a na-achọkarị software CAD maka ịhazi. Sọftụwia na-ejikwa nyocha na sọftụwia maka CAD dị iche iche na teknụzụ yana iche na ibe ya, agbanyeghị enwere ụzọ abụọ na nke a.Fọdụ ndị na-eweta ihe ngwọta na-eme ka usoro abụọ ahụ gbadoro ụkwụ n'ụzọ zuru oke ka ị ghara iji otu na-enweghị nke ọzọ. Ha ga - emekwa CAD akụkụ nke otu, mechiri emechi nke ọma. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ha na-ere nyocha na ngwọta CAD, ọnụ. 3 Ọdịdị na In-Lab bụ ihe atụ nke sistemụ dị otú ahụ.Ewezuga bụ exocad CAD, nke kwụpụrụ iche kpamkpam na nyocha na ngwanrọ nyocha. Exocad na-ere CAD naanị. Exocad na - arụ ọrụ na ọtụtụ igwe nyocha na ndị nrụpụta ahụ na - arụ ọrụ na exocad ka e nwee ike ị nweta arụmọrụ zuru oke nke mere na exocad na nyocha "X" na - arụ ọrụ na - enweghị nsogbu. Na njedebe CAD na nyocha ga-arụ ọrụ na 100% na-enweghị onwe ha.
Ngwaọrụ SOFTWARE:Tụle nuances edepụtara n'elu enwere ike ịdị iche na arụmọrụ nke sọftụwia nyocha. Fọdụ ga - enyere gị aka ịchịkwa arụmọrụ na nyocha nyocha, na - enye ohere ka ịhazi usoro nyocha nke nyocha a karịa. Softwarefọdụ nyocha nyocha ga-enye gị ikike ka ukwuu ịrụ ọrụ na arụmọrụ na-enweghị ọkọlọtọ ma ọ bụ ọbụna mepụta onwe gị; dịka ọmụmaatụ mgbe ị na-achịkọta data banyere ezé eze zuru ezu maka ebumnuche nke ịnakọta ndekọ ndị ọrịa zuru ezu.
ANLỌ AH F AKWILKWỌ AKW TKWỌ:Mgbe iburu ụzọ nyocha data na -emepụta data nyocha na ụmụ amaala ma ọ bụ nke nwere ikike a na-akpọ "Cloud Cloud". Ozugbo scanning na dechara data bụ “meshed” na ọ bụ n’oge a na Doppler data nwere ike ịghọ ọzọ ma ọ bụ na-erughị usable site onye ọrụ na mpụga nke kpọmkwem nyocha / CAD workflow. Usoro mechiri emechi, dị ka 3Shape, ga-ebugharị data meshed na usoro okike. Ihe nyocha ọ bụla na-arụ ọrụ na exocad CAD ga-enye onye ọrụ ohere "ntupu" data na-eji usoro mmeghe dị ka stl, ply or obj. Ihe kachasị mkpa ebe a bụ na ọ bụrụ na ịhọrọ sistemụ arụmọrụ na-emechi emechi, jide n'aka na sistemụ ahụ ka na-enye gị ohere mbupụ data nyocha na usoro faịlụ "mepere emepe" dị ka atọ ndị a ka kpọtụrụ aha (.stl, .ply na .obj. ) nke mere na i scanomi data ga-eji na-enweta site na gị n'ichepụta mmekọ. Ha nwere ike ịgba gị ụgwọ maka ikike a.
LLỌ AHIC IWU:Feesgwọ akwụkwọ ikike kwa afọ maka nyocha nyocha na sọftụwia na-adị mfe izere. Ihe ikwesiri ime bu izu nyocha nke n’eji oru ya na CAD exocad. Ndị isi nyocha niile nke na-arụ ọrụ na exocad enweghị ụgwọ kwa afọ maka nyocha ma ọ bụ sọftụwia nyocha. Ọ bụrụ na ịzụta 3Shape, Dental Wings ma ọ bụ In-Lab, n'ihi na nyocha ahụ na CAD bụ otu ngwugwu, ị na-akwụ ụgwọ ụgwọ ego kwa afọ maka akụkụ nyocha ahụ na akụkụ CAD. Ihe ọghọm nke a bụ na ọ bụrụ na ị kpebie ịghara ịkwụ ụgwọ ụgwọ nyocha gị na-akwụsị ịrụ ọrụ, ọ bụghị naanị sọftụwia CAD. Exocad nwere nhọrọ abụọ maka ngwungwu ngwanrọ CAD ha yana otu n'ime ha ụgwọ ikike kwa afọ bụ nhọrọ.
ỤBỌDỤ:Ọnụ nyocha a na-akwụsi ike n'oge a na mmalite ha. Gbalị iwepụ ọnụahịa nke nyocha ahụ bụ n'ezie ihe ịma aka na 3Shape, In-Lab n'ihi na a na-ere sistemụ ha dị ka ihe nyocha "nyocha na CAD", yana ọ dị oke ụkọ maka na ha ga-ere CAD naanị. Ọ dịkarịa ala anyị ahụtụbeghị ndị nrụpụta a na-ere naanị nyocha ahụ. Ọ bụrụ n ’ị na-eche ịzụrụ naanị nyocha (ya na sọftụwia nyocha) ị nwere ike ịtụ anya ịkwụ ụgwọ n’etiti $ 7,000 na $ 18,000. Ọ gwụla ma ịchọrọ naanị nyocha iji gbakwunye na nyocha nyocha mgbe ahụ ị ga-achọ sọftụwia CAD. Ọzọkwa, ọnụ ahịa CAD nwere ike ịghọ aghụghọ dabere na azịza ị họọrọ. N'ọnọdụ ọ bụla ị na-efu ego maka itinye ego maka nyocha na CAD ga-esi na $ 14,000 gaa $ 35,000.
Dịka ị pụrụ ịhụ na enwere mgbanwe ole na ole iji tụlee mgbe ị na-ahọrọ nyocha ụlọ nyocha. Nke a pụtara na ịkọwapụta "nyocha" kachasị mma bụ ihe na-agaghị ekwe omume n'ihi na nhọrọ ọ bụla bụ azụmaahịa. Jide n'aka ịhọrọ ihe ngwọta dabara na mkpa gị dum. Wayzọ a ị ga - enweta nyocha nke “kachasị mma” maka gị, dịka akọwara gị.
PREV: Ndụmọdụ mgbe ị na-agba agba agba Zirconia zuru ezu
OSOTE : PFM VS Zirconia: Kedu ihe dị mma?
Vsmile Mosi2 Heater Dental Funance Ngwa
Vsmile grinder Ma Polisher
Vsmile CADCAM igwe igwe